Mishanu misika yemasheya inogona kuita zvirinani mu2019 | Ehupfumi Zvemari
Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti gore rino harisi kuzonyanya kunakira misika yequity, kunyanya mune mamwe masheya anoratidza technical chinhuchete kushaya simba. Ichave iyo nguva yekuongorora yedu yekudyara portfolio uye nekuita shanduko mairi nechinangwa chega chekusabatwa mukudzikira kunogona kuita kuti varimari vadiki nepakati varasikirwe nemari yakawanda mukati memwedzi gumi nemiviri inotevera. Iko kune kwakajairika dhinomineta yezviito zvavo kunenge kuri kunyevera pamusoro pezvimwe zvehunyanzvi kufunga.
Mishumo yezvemari zvakare haipe tariro yakawanda nezve izvo zvingave zvakaoma gore rino rekutengesa. Mupfungwa iyi, iyo International Monetary Fund (FMIE) ichangobva kuburitsa yazvino "World Economic Outlook" (WEO mushumo) mushumo, iyo inogadzira kukura kwepasi rose kwe2019 iyo icharamba ichitsigirwa uye pamwero wakaenzana we3,7% segore rapfuura. Mune yakatarwa kesi yeSpain, iyo IMF inoderedza fungidziro dzekukura kwehupfumi hweSpanish ne2,2% mu2019. Ndiko kuti, zvikamu zvishanu zvegumi zvakaderera pane izvo zvakagadzirwa muna2018.
Kune rimwe divi, padanho repasirese, chirevo ichi chinosimbisa kuti kukura kunopfuura izvo zvakawanikwa mune chero makore apakati pa2012 na2016, panguva iyo hupfumi hwakawanda hwasvika kana kuti hwasvika basa rakazara uye umo kutya kwekare kwekupesana kwakaparara. Nekudaro, zviremera zvehupfumi zvichiri nemukana wakanaka kwazvo wekusimbisa uye kuita shanduko dzinosimbisa kukura.
1 Zvikamu: mikana yebhizinesi
2 Nzvimbo dzekugara uye dzakatsiga zvikuru
3 Zuva negungwa zvicharamba zvichikwira
4 Banking iri pasi pehuremu
5 Chimwe chinogoneka kushamisika: humbozha
Zvikamu: mikana yebhizinesi
Ongororo zvakare inosiyana nenzvimbo, uye inosanganisira hupfumi hweLatin America (Argentina, Brazil neMexico), hupfumi hweEuropean hwabuda (Turkey), South Asia (India), East Asia (Indonesia neMalaysia), Middle East (Iran). ) uye Africa (Chamhembe Afrika). Ese aya misiyano anofanirwa kuunganidzwa pamwe nekuchengetedzeka kwakanyorwa pamisika yemari. Asi hapana mubvunzo kuti pachave nehunhu hunovandudza a hunhu huri nani kupfuura vamwe uye apa ndipo paunofanirwa kutungamira mashandiro ako kuti uwane mari kubva kumabasa ako inobatsira. Nekuti njodzi dzegore rino dzinenge dzakakwira zvakanyanya uyezve ivo vanogona kukugadzira inopfuura rimwe dambudziko kwauri kubva ikozvino.
Saka kuti iwe ugone kuendesa mari yako gore rino nemazvo, tichaenda kunongedzera kuti ndeapi mapato emusika wekutengesa anogona kuzviita zvirinani. Vachave vashoma uye vanochengeta nguva uye apo mikana mikuru yebhizimusi inozoiswa mune ino nyowani yemusika wemusika. Kunze kwechinhu chehunyanzvi chavanogona kugadzira kana kugadzira mumwedzi ichangopfuura. Nekuti pakupera kwezuva, zvazviri ndezvekusarudza yemastock values ​​ane kukoshesa kwakakwirira kugona. Mupfungwa iyi, zvirevo hazvina kunyanya kuwanda uye zvichave zvakafanira kunyatso tsanangurwa mukuwongorora.
Nzvimbo dzekugara uye dzakatsiga zvikuru
Zvikamu zvemusika wekutengesa zvinofanirwa kusarudzwa zvisina kutungamirwa nekusagadzikana, ndoda kubhadharisa chikwereti mumabhizinesi account avo. Kubva pane ongororo iyi, akachengetedzeka uye masheya akachengetedzeka ndiwo anogona kuita zvakanakisa mugore rino rakaomarara rakatimirira kubva zvino. Imwe yacho inomiririrwa ne makambani emagetsi kuti pamusoro pekupa ino yakakosha ficha, ivo vanopa inonakidza kwazvo chikamu chemugovano. Nesimba rakatarwa uye rakavimbiswa repagore rinotenderedza 5% uye mune chero mamiriro ari pamusoro izvo zvinopihwa nezvose zvakagadziriswa mari yemitengo isingatombo pfuura 1%.
Ehe, chikamu chezvekudya chinofanirwa kunge chiri chimwe cheyakagadziriswa mune ino chaiyo dziva rekutsvaga mikana mumisika yemari. Hazvishamisi kuti, vanozvibata zvirinani kupfuura vamwe vese munguva dze kuwedzera kusagadzikana mumisika yemari. Nekudaro, rimwe rematambudziko makuru mukuzadzisa ichi chishuwo ndechekuti kune mashoma kwazvo masosi emusika wemasheya muSpanish equities. Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekuenda kunzvimbo dzinokwira dzenyika dzese kana iwe uchida kuve nemhando dzakasiyana siyana dzenzvimbo ino inochengetedza nzvimbo.
Zuva negungwa zvicharamba zvichikwira
La mushanyi chiitiko muSpain ichakura mu2019 kekutanga mumakore gumi pazasi pehupfumi hwese nekuda kwekudzika kwakadzika kwemisika huru sosi uye kudzoreredzwa kwenzvimbo dzinokwikwidza muMediterranean, sekureva kweAlliance for Tourism Excellence, Exceltur. Chero zvazvingaitika, Exceltur yakadzikisa kukura kwezviitiko zvevashanyi kuSpain kwe2019 kusvika 2,6%, kubva pa3,3% yakafungidzirwa munaKubvumbi, chiyero chiri chegumi pazasi pekuita kwevanoongorora vanofungidzira hupfumi hweSpanish (2,7%)
Chero nzira, iyo Tourism chikamu inogona kunge iri yevanonyanya kuita misika yemari. Hazvishamisi kuti indasitiri iri mukuwedzera kwakasimba uye ine data riri nani pane iro rinoratidzwa mune mamwe matunhu akakosha mumusika wemasheya. Kubva pane ino chaiyo chikamu, Sol Meliá, NH Mahotera kana Amadeus zvinoumba dzimwe nzira dzakanakisa dzekuita kuti hupfumi hwemunhu ubatsirwe panguva ino ichangotanga. Hazvishamise kuti hazvigone kukanganwika kuti pfuma yemari yakatarwa nezuva nejecha zvinofadza zvikuru kugamuchira kutengeserana pamusika wemasheya.
Banking iri pasi pehuremu
Chero zvazvingaitika, hapana mubvunzo kuti chimwe chezvishamiso zvikuru gore rino chinogona kubva kumapoka ebhengi. Izvi zvinotsanangurwa nenyaya yekuti chirango chakasimba kwazvo chakamutsazve mukati megore ra2018 uye inogona kunge iri nguva yekudzoreredza mumutengo wemasheya ayo nekupa zvakanakira mitengo pamutengo wakanangwa nemakambani emari aya. Nekudaro, iyo njodzi ichiri yakakwira kupfuura mune mamwe matunhu nekuti vanochengeta dambudziko rakafanana sepakutanga. Nekushomeka kwechimiro kunogona kukonzera kuti vawire munzvimbo dzavo.
Kune rimwe divi, chikamu chakanaka cheaya makambani akanyorwa akasiya akakomberedza makumi maviri muzana emitengo yavo yemusika wemari mugore rapfuura. Kurangwa kwakaomarara uye pamwe kwakanyanyisa nevashambadziri uko kunogona kutungamira mukukosha kwakanyanya mumutengo wayo kubva zvino. Iwo machengetedzo anogona kuve anonakidza kwazvo kuhaya kana akaitirwa mashandiro enguva pfupi. Co mukana wekudzokorodza kupfuura wakakosha nekuda kwekudzikiswa kwakataurwa panguva ino.
Chimwe chinogoneka kushamisika: humbozha
Izvo zvakare zvinoratidza kuti makambani akanyorwa anomiririra chikamu chepamusoro anogona zvakare kuita zvirinani mumisika yemasheya. Pachinyakare zvagara zvichiitika nenzira iyi uye kunyanya kana zviratidzo zvekutanga zveutera zvikaonekwa mumisika yemari. Mupfungwa iyi, haigone kukanganwika kuti chikamu chemhando yepamusoro chinopesana-cyclical uye chinogona kubatsirwa neichi chiitiko mukutenga. Kunze kwekuongorora kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe iyo yakakosha.
Kana iwe uchida kunangisa maziso ako kune ino yakasarudzika chikamu, iwe hauzove neimwe sarudzo kunze kwekutungamira maziso ako kumatunhu ekare kondinendi, ndimo mune izvo zvirevo pamusika wepasi rose wemusika wemasheya zvinonyanya kunyorwa. Mune mamwe emakesi ivo vanopa mukana wekuwongorora kupfuura zvinokukoka kukukoka iwe kuti utange mashandiro mune ino chikamu yemari. Chimwe cheanonyanya kutaurwa hunhu ndechekuti ivo makambani asina kugadzikana zvine chekuita nekota yavo uye vanogona kuita kuti iwe uwane mari yakawanda munzvimbo pfupi kwazvo yenguva. Kunyangwe uri pamutengo wekufungidzira akateedzana engozi dzinogona kuyera yako nzira yekudyara.
Mune ino chaiyo kesi kune maviri anopesana zvachose maitiro. Kune rimwe divi, vanogona kuita zvakanaka kwazvo gore rino nekuda kwekujeka kwavo batanidza nebasa rekushanya, uko kuyerera kwevafambi kunoratidza kumusoro kumusoro uye nguva dzose kwakanaka kwazvo. Saka kuti nenzira iyi, ivo vanoumba chikamu chakakosha kwazvo chenzvimbo yako nyowani nekuda kwavo kusahadzika kufarira mumaziso evashambadzi.
Asi kune rimwe divi, iro guru mutoro nderekuti zvikamu zvaro zvinogona kuramba zvichikwira mugore rino idzva mitengo yakakwira iyo iyo petroleum. Pamusoro pematanho e $ 80 dhiramu. Izvi zvaizoshandura kuita kushomeka mumutengo wezvikamu zvaro. Hazvishamise kuti hukama hwavo hwakananga nekuti sezvo mutengo wemafuta asina kukwirisa wakakwira, iwo masheya anotambura kukosheswa kwavo mumisika yemari. Beyond kumwe kufunga kwaizotsanangurwa mune zvimwe zvinyorwa.
Chero zvazvingaitika, ichave iri imwe yezvikamu zvekutarisa mumwedzi gumi nemiviri inotevera. Zvirinani kuita kukurumidza kwazvo mashandiro umo mari yakasimba inogona kugadzirwa. Uye mune chero zvazvingava, seimwe yezvishamiso zvikuru zvinogona kuunzwa na 2019. Sezvauchaona, zvikumbiro zvebhizimusi hazvisi kuzoshaikwa mumazuva ano uye izvozvi zvinongoramba zviripo kuti zviporofita izvi zvizadzikiswe mumusika wemasheya zvinogona kubatsira kwemwedzi mishoma inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Zvikamu zvishanu zvemasheya zvinogona kuita zvirinani mu2019